Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya oo shir la yeeshey madaxda Ha’yadda UNODC. | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya oo shir la yeeshey madaxda Ha’yadda UNODC.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliya oo shir la yeeshey madaxda Ha’yadda UNODC.
Shir looga hadlayay sidii loo tayeyn lahaa loona tababari lahaa xubnaha ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ee ka shaqeeya qeybta dembi baarista (CID) ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, sida ay SONNA ka soo xigatay taliska boliiska Soomaaliyeed.
Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, oo ay la socdaan Saraakiil sare oo ciidanka ah, ayaa maanta kulan kula qaatay Airport-ka Caalamiga ah ee Muqdisho Madaxda Sare ee Hay’ada UNODC oo Qaramada Midoobe u qaabilsan ka hortagga dembiyada Saldhigga Booliiska (AAIA).
Kulanka ayaa looga hadlay qorshaha tayeynta iyo Tababarrada Xubnaha Ciidanka ee Baarista Dembiyada, iyada oo la is dhaafsaday qorshaha mustaqbalka dhow.
Taliska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wada dadaallo ku aaddan howlaha lagu tayeynayo adeegyada Booliiska ee bulshada ay u qabanayaan,iyadoo dhawaan dib u habeyn lagu sameeyay howlihii adeegyada (CID) ay ka helaan bulshada Soomaaliyeed.
Previous articleFatahaadda Webiga Shabeelle Saameyn noocee ah ayuu yeeshay Warbixin.
Next articleDacwad ka dhan ah Maxamed Bin Salman oo Mareykanka laga furay.